Xariga Xildhibaan oo kala jebiyey hay’addaha dowliga ee Somaliland
Xildhibaan Dhakool ayaa maxkamad lasoo taagay isaga oo gacmaha ka jeebaysan | Xuquuqda Sawirka: Online
HARGEYSA, Somaliland – Booliska Somaliland ayaa isbuucii hore xabsiga dhigy Xildhibaan Maxamed Axmed [Dhakool] kadib markii ay hoygiisa ku duuleen.
Taliska Bileyska ayaa sababta ay u soo xireen Mr Dhakool ku fasiray kadib uu ku dhaqaaqay "ficilo ka dhan ah qaranka".
Illo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in Mudanaha lagu haysto hadalo uu saxaafada siiyey oo ku aadan dabaaldega 18-ka May.
Mr Dhakool ayaa sheegay in maalintiisa aysan "maalin qaran" balse ay tahay maalintii "Beesha SNM" wuxuuna codsaday in gebi ahaanba daqaada laga saaro.
Maamulka goon isu taagga ah ayaa maalintaasi sanad kasta u dabaaldega markii ay xorriyadda kasoo ceshteen Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Inkasta oo tan iyo xilligaasi aysan helin aqoonsi, horumar walba oo uu gaarey waxaa dharbaaxo ku noqonayay dagaalka ka dhanka ah xorriyada hadalka.
Xeer-illaalinta dacwadaasi kusoo oogtay sharci dejiyaha ayaa maalintii xigtay maxkamad soo taagtay Mr Maxamed, balse waji gabax ayey kala kulantay.
Maxkamadda Hargeysa ayaa sheegtay in aysan qaadi karin dacwadaan maadaama Xildhibaanka uu xasaanad leeyahay.
Dacwd oogeyaasha ayaa codsi ku aadan in ay xasaanada kala noqdaan u diray Guddiga Anshaxa iyo Xasaanada ee Golaha Wakiilada oo uu ka tirsan yahay.
Hasayeeshee, Guddigu gaashaanka ayuu ku daruuray codsigaasi, waxa uu sharci darro ku tilmaamay hanaanka loo maray qabashada Xildhibaanka.
Xildhibaan Maxamed Axmed [Dhakool] oo degaan doorashadiisu yahay gobolka Sool ayaa wali xabsi ugu jiray xukuumada Muuse Biixi.
Dadka u dooda xuquuqd aadanaha ayaa ku tartarsiiyey maamulka Hargeysa in uu ilaaliyo xorriyadda uu qofku u leeyahay in uu cabiro fekerkiisa.
Sidda laga soo xigtay warbixin kasoo baxday Hay’ddaha Xuquuqul Insaanka, in ka badan tobban ruux oo u badan wariyeyaal iyo Abwaano ayaa sanadkii hore lagu xiray howlgalada ka dhanka ah xorriyada hadalka.
Muranka ugu dambeeyay ee ka dhashay Xarig Xildhibaan Dhakool ayaa u muuqda mid sii kala fogeeyay hay’addaha Fulinta, Garsoorka iyo Xeer-dejinta oo isku dhinac noqday, taasi oo dharbaaxo ku ah xukuumadda.
Xildhibaan xarigiisa kala qeybiyey hogaanka Somaliland oo lasii daayey
Somaliland 17.06.2019. 13:28
Xukuumada Biixi ayaa waji gabax kala kulantay in ay ku qaado mudanaha dacwad ay kusoo oogtey.
Wasiiro ka tirsan Somaliland oo shaaciyey in laga helay Coronavirus
Somaliland 02.06.2020. 09:15
Somaliland 18.05.2020. 09:30
Amnesty International oo eedeyn u jeedisay xukuumadda Muuse Biixi
Somaliland 09.04.2020. 09:55
Somaliland oo la dalbaday in ay ka dhacdo doorasho lasoo horumariyey
Somaliland 22.02.2020. 14:05